Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Ilaalin guri ma laha? Ma jiraan adeegyo? Samee safarka mar kale weyn!
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Investments • Wararka Raaxada • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa maanta soo dhejisay warqad meelayneed waxayna ka digtay in adeegyada jarista ay hoos u dhigi doonaan ama xitaa joojin doonaan dib -u -dhiska degdegga ah ee loo baahan yahay ee warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay fahamsan tahay in da'da Covid, shirkadaha diyaaradaha, maqaayadaha qaarkood iyo hoteellada ay tahay inay yareeyaan adeegyada si ay u noolaadaan.
Nasiib darro, muddadan, waxaan ku aragnay adduunka oo dhan hoos u dhac ku yimid tayada alaabta dalxiiska ee loo soo bandhigo dadweynaha.
Dunida ka dib COVID-19 tani waxay macnaheedu noqon kartaa in soo jiidashada safarka la tirtiro talaabo talaabo, taasoo ka dhigaysa soo noqoshada mid adag.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka wuxuu ku boorrinayaa hoggaamiyeyaasha warshadaha inay ka dhigaan safarka mid xiiso leh, xiiso leh, oo soo jiidasho leh mar kale.
Goynta daryeelka guriga iyo bixinta adeegyada kale ee badbaadinta kharashka ayaa hoos u dhigi doona ama xitaa joojin doona dib-u-dhiska warshadeena safarka iyo dalxiiska.
Kuwa soo jiidan doona booqdayaasha iyagoo dhoola caddeynaya iyo adeegyo wanaagsan ayaa noqon doona kuwa guuleysta.
Safarku waa inuu mar kale noqdaa mid weyn!
“Dunidu waa inay la noolaataa COVID-19. Fursadda ah in dib loogu soo celiyo safarka iyo dalxiiska heerarkii 2019 oo laga dhigo mid aan soo jiidasho lahayn, madadaalo leh, ama raaxo leh si aad u aaddo safar waa mid aan wax tar lahayn ”ayuu yiri Juergen Steinmetz, Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
”Kuwa kor u qaada oo aan hoos u dhigin adeegyada ayaa noqon doona kuwa ku guuleysta weyn. Tallaabooyinka goynta lacagta ayaa la socon doona cawaaqibka goynta ganacsiga.
Steinmetz ayaa raaciyay.
"Waxaan ku dhiirri -gelineynaa hoteellada inay sii wataan adeegyada guriga, maqaayadaha iyo baararka ay furan yihiin, hana iloobin inaad dhoolla -caddeynta ku diiddo adeegyada!"
WTN waxay rabtaa inay ku dhiirigeliso daneeyayaasha inay ka shaqeeyaan dib-u-sixitaanka dalxiiska adduunka rajada laga qabo covid-ka ka dib. Safarradu waxay rabaan in la koolkooliyo, socdaalku waa inuu ahaado mid xiiso leh, ee ma aha mid walwal leh, oo wuxuu bixiyaa adeegyo aadan helin markaad guriga joogto.
Samee safarka mar labaad weyn:
Dib u soo celi nadaafadda qolka caadiga ah iyo beddelidda gogosha hoteellada iyo meelaha lagu nasto.
Kor u qaad adeegga laga helo shirkadaha diyaaradaha iyo in laga takhaluso lacag badan.
Samee saacado u roon dadka isticmaala socdaalayaasha.
Ha isku dayin inaad dadka oo dhan wax u noqoto.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka, Dr. Peter Tarlow dhajiyay waxyaabaha soo socda si ay u dhigaan warqad websaydka WTN.
Nasiib darro, muddadan, waxaan ku aragnay adduunka oo dhan hoos u dhac ku yimid tayada alaabta dalxiiska ee loo soo bandhigo dadweynaha. Dhab ahaan, qayb ka mid ah sababaha hoos u dhacaani waxay ahayd masiibada. Faafida ayaa laga yaabaa inaysan ahayn sababta kaliya ee hoos u dhacan. Kormeerayaasha taxaddarka leh ee goobta safarka iyo dalxiiska ayaa durba xusayay suurtogalnimada bilowga hoos u dhac hoos u dhaca ka hor masiibada iyo hoos u dhaca tayada adeegga ayaa muddo dheer dhaawici doonta warshadaha dalxiiska.
Sababaha lagu xusay hoos u dhaca tayada adeegga macaamiisha ayaa u dhexeeya qiimaha shidaalka oo sarreeya ilaa daciifinta dhaqaalaha dalal badan oo reer galbeed ah. In kasta oo sababahaasi ay yihiin kuwo sax ah oo run ah, waxay kaliya bixiyaan qayb ka mid ah sheekada. Intaas waxaa sii dheer, marka laga eego dhinaca wershadaha safarka iyo dalxiiska, waa sababa dadban: waxyaabaha ku dhaca warshadaha. Haddii warshadaha safarka iyo dalxiiska ay tahay inay ku guuleystaan ​​waqtiyadan adag, waa inay sameysaa wax ka badan kaliya inay isu aragto dhibbanaha dhaqaalaha ama xumaanta dadka kale waa inay sidoo kale isbaarataa si ay u aragto halka ay iyaduna hagaajin karto.
Waxaa laga yaabaa in halista ugu weyn ee warshadaha firaaqada (iyo in yar oo ka mid ah warshadaha safarka ganacsiga) ay tahay xaqiiqda ah in safarku lumiyay heshiis wanaagsan oo jaceylkii iyo sixirkii. Iyada oo ku deg -degaysa hufnaan iyo falanqayn tiro leh, warshadaha safarka iyo dalxiiska ayaa laga yaabaa inay iloobaan in socotada kasta adduun u metelo naftiisa, tayadana waa inay had iyo jeer tirisaa tirada.
Gaar ahaan warshadaha safarka firaaqada, sixir la'aantaani waxay la macno tahay inay yaraadeen sababihii la rabay in loo safro oo looga qaybgalo khibrada dalxiiska.
Dib u soo celi nadaafadda qolka caadiga ah iyo beddelidda gogosha
In la casriyeeyo adeegga laga helo shirkadaha diyaaradaha iyo in laga saaro khidmado badan
Samee saacado u roon dadka isticmaala socdaalayaasha
Samee sixir iyada oo loo marayo horumarinta wax soo saarka. Xayaysiis yar oo sii.
Haddii dalxiiska la rabo inuu ka soo kabto maqnaanshaha meheradda sannadkii iyo badhkii la soo dhaafay markaa waa inay heshaa siyaabo ay uga gudubto filashooyinka oo aan marna ka badin kiiskaaga. Qaabka ugu wanaagsan ee suuqgeynta waa badeecad wanaagsan iyo adeeg wanaagsan. Warshadaha dalxiisku waa inay ku bixiyaan waxay ballanqaadaan qiimo macquul ah.
Warshadaha dalxiisku waa inay abuuraan jawi ammaan ah oo sugan. Waxaa jiri kara sixir yar haddii dadku cabsadaan. Ganacsiyada iyo jaaliyadaha u janjeera sixirka waxay ogaadaan in qof walba door ku leeyahay inuu abuuro waayo-aragnimo dalxiis oo wanaagsan iyo mid abuuraya jawi u gaar ah oo gaar ah oo kaliya maahan booqdaha laakiin ganacsiyada dalxiiska iyo bulshooyinka.
Oktoobar 22, 2021 at 09: 35
Waad ku mahadsan tahay qoraal aad u fiican. Waxaan rajaynayaa inaad sii waddo mawduucyada noocaas ah. Guul ayaan kuu rajaynayaa. Mahadsanid